Wasiir Najah oo u Mahad celiyay Taageerayashii shalay Soo bandhigay Xamaasada | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wasiir Najah oo u Mahad celiyay Taageerayashii shalay Soo bandhigay Xamaasada
Wasiir Najah oo u Mahad celiyay Taageerayashii shalay Soo bandhigay Xamaasada
Wasaarradda dhalinyarrada iyo cayaaraha koonfurgalbeed waxa ay u mahadcelineysaa dhamaan taagerayaashii shalay soo buuxiyay garoonka ENG-Yariisow Ex Koonis,ee u soo daawasha tagay ciyaarti aay wada cayaareyn xuallaka Jubbaland iyo Koonfur Galbed Soomaaliya oo uu Guusha ku raacday xulka KGS .
Wasiirka Wasaarradda dhalinyarrada iyo cayaaraha koonfurgalbeed hon Ibrahim Adan Ali Najah ayaa waxa uu aad ugu mahad celiyay dhamaan taagerayaashii shalay soo buuxiyay garoonka ENG-Yariisow Ex Koonis,waxana uu yiri “Dhiiragelinta ciyaaryahanadda, Xamaasadda iyo garab istaagiina ayaa qeyb lixaad-leh ka qadatay Guusheenna,waxaa innoo ballan ah inaan kulankeenna xiga aan sii kordhinno taagerrida xulkeenna”.
Shalay galab ayaa Kooxda kubadda Cagta Maamulka Konfur Galbeed Soomalia waxa ay soo bandhigeen Ciyaar wanaag oo daawa shadeeda aan laga caajisin waxana guusha galabta ay gaareen qeyb weyn ku laha gool hayaha koxda oo muujiyay karti iyo ad adeeg weyn
Ugu dambeyntii mudane Ibrahim Adan Ali Najah ayaa waxa uu sheegay in Koobkan ugu dabaal deggi doonaan Magaaladda Baydhabo haduu Alle idmo.
Maqaal horeSoomaali ku geriyootay doon ku degtay xeebaha Giriiga
Maqaal XigaSAWIRRO:-Xulka kubada cagta Koonfur Galbeed oo maanta Tababar ku qaateen Stadium Muqdisho.
Al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaano katirsan Jubada Hoose